Mahadum Istanbul iji tinye ndị ọrụ agụmakwụkwọ ọzụzụ ... RayHaber | raillynews
HomeGeneralỌrụMahadum Istanbul ga - akpọta ndị ọrụ agụmakwụkwọ
04 / 12 / 2019 Ọrụ, General
Mahadum Istanbul ga - akpọta ndị ọrụ agụmakwụkwọ; Dabere na isiokwu dị mkpa nke N Regulation na Nkwalite na Nkwekọrịta nye Ọmụmụ Staff giren nke e bipụtara na Official Gazette na 2547 na isiokwu ndị metụtara Iwu ahụ gụrụ 12.06.2018, Prọfesọ, Assoc. A ga-eweghachi ndị ọrụ 9 na ndị otu ya.
Ndi choro ime ka ha tinye aka na ndi oru puru iche: CV ha, ariri ntinye akwukwo nke ha kwuputara aha isi oru nyocha na uzo PDF (aka), Akwukwo Ntinye akwukwo, Akwukwo ndi mmadu, akwukwo ndi sayensi (Ha gosiputara otu n’ime akwukwo ha dika isi oru nyocha), nzuko na akwukwo akwukwo. ọrụ, arụmọrụ na akwụkwọ ndị metụtara ya, ihe omume agụmakwụkwọ, na-aga n'ihu ma gwụsịa na doctorate management ha, ntozu oke nka ma ọ bụ ọrụ nna ukwu, gụnyere akwụkwọ na ozi gbasara onyinye ndị mahadum nchịkwa 6 a kwadebere na usoro PDF na CD ma ọ bụ Portable Memory nke Rectorate Personnel Ngalaba Onye isi oche. ha ga-etinyere onye ọzọ.
1- Arịrịọ ntinye, nke ha na-akọwakwa aha isi ọrụ nyocha,
2- Mpempe akwụkwọ maka ndị ọrụ agụmakwụkwọ 1 nwere foto biometric (dị maka ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ) na weebụsaịtị nke Ngalaba Ọrụ nke Mahadum,
3- Nyocha nyocha Nọmba nke 2 na Formlọ nyocha Archive (yana Foto Biometric),
4- Ndekọ Mpụ,
5- Usoro Vitae na Ọha Ntanetị, Asambodo Ọkachamara Ntanetị, Asambodo Asụsụ Mba Ọzọ, Diplomas (Nchịkwa, Nna-ukwu, Dọkịta, Nkà na nka, Ọkà),
6- Foto ndi mmadu nke 1 (nke emere na ọnwa isii gara aga),
7- Detuo nke Identity
8- Ha kwesịkwara ịnọ na ha dị ka ọrụ nyocha bụ isi.
Ndi choro itinye akwukwo maka ndi otu ndi otu ndi oka mmuta: Ha kwesiri itinye aka na ndi Rectorate Personnel Department tinyere CD ma obu Portable Memory nke edoziri na usoro 4 PDF tinyere CV ha, akwukwo ndi nkuzi, akwukwo ndi edere na ihe omuma sayensi na akwukwo.
Mkpakọrịta ndị ọkachamara
1- Mpempe akwụkwọ maka ndị ọrụ agụmakwụkwọ 1 nwere foto biometric (dị maka ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ) na weebụsaịtị nke Ngalaba Ọrụ nke Mahadum,
2- Nyocha nyocha Nọmba nke 2 na Formlọ nyocha Archive (yana Foto Biometric),
3- Ndekọ Mpụ,
4- Usoro Vitae na Ọha Ntanetị, Asambodo Ọkachamara Ntanetị, Asambodo Asụsụ Mba Ọzọ, Diplomas (Nchịkwa, Nna-ukwu, Dọkịta, Nkà na nka, Ọkà),
5- Foto ndi mmadu nke 1 (nke emere na ọnwa isii gara aga)
6- A choro photocopy nke NJ.
Ndi umu akwukwo ka ha tinye aka na ndi dibia a: Nhaghachi, Ngwa nye ndi oru, Nchọba nke Nọmba nke 2 na mpempe akwụkwọ nyocha (Biometric Photo), Ndekọ Iwu, akwụkwọ Doctoral, Ndepụta Ọha, Ọrụ Sayensi na Nsaa na weebụsaịtị nke Ngalaba Ọrụ nke Mahadum. 4 CD ma ọ bụ Portable Memory, nke edoziri na usoro PDF, kwesịrị itinye aka na nkeji ndị emetụtara na mmadụ.
1- Maka aha niile ekwusara, ndị Kọmiti Interuniversity ga-anabatakwa ma nabata nzere diplọma ndị enwetara na mba ọzọ.
2- 657 nke Iwu Nke 48. Ha aghaghi imezu ihe nile a choro.
3- Ndị oghere mmeri ekwesịghị inwe ọrụ ọ bụla nke Ọrụ Ọchịchị.
4- Umu nwoke ndi nwoke ndi choro iru oru ha ekwesighi inodu n ’ulo ikpe ma obu ozo n’ihe banyere oru ndi agha.
5- A ga-etinye akwụkwọ anamachọi dị na nkeji dị mkpa n'ime ụbọchị 15 mgbe mbipụta nke mgbasa ozi ahụ na Official Gazette.
6- Oge ngwụcha maka Ngwa: 15. Day.
7- A ga-eme akwụkwọ anamachọihe n'onwe gị. A gaghị anabata akwụkwọ nzipu ozi.
8- Ndi umu akwukwo ndi choro igha ndi agha ka akpokoro tebulu akwukwo omuma ha dika nke ulo akwukwo nke Mahadum Istanbul na ulo akwukwo nke Mahadum.
9- Annex 2547 nke Iwu Nke 38. (2547 Iwu Nke 50 edemede 1 nke paragraf nke mbụ (d) nke ọrụ nke doctorate ma ọ bụ ntozu oke nka na mahadum na-enweghị ikike itinye akwụkwọ.
10- Ndi ochichi ndi n’eme ihe puru iche na ndi oru prọfesara ma obu ma obu onye oru ndi n’eweghi akwukwo nyocha nke onu a gha acho imeju ya na akwukwo nke ndi oru ma nye ya n’aka ndi oru ndi otu oru.
11- anyị Ad http://www.istanbul.edu.tr/ nwere ike ruru na.
Mahadum Hakkari ga - akpọ ndị ọrụ agụmakwụkwọ (2 Personnel)
Mahadum Hakkari ga - akpọ ndị ọrụ agụmakwụkwọ (10 Personnel)
Mahadum Kırklareli ga-enweta ndị ọrụ gụrụ akwụkwọ
Mahadum Tokat Gaziosmanpaşa ga-enweta ndị ọrụ agụmakwụkwọ
Ndị na - ahụ maka ndị ọrụ na Mahadum Istanbul